ကျနော့်အသက် ၂၆ နှစ်ပါ။ ကျနော့်လည်ပင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ လလောက်က အကျိတ်ပေါ်ပါတယ်။ အကျိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာက အနည်းငယ် ကြီးနေရာကလွဲလို့ ဘာခံစားမှုမှမရှိပါ။ အကျိတ်ကလည်း လည်ပင်း ရဲ့ ညာဘက်မှာ ဆားငံသီးစေ့လောက် ရှိပြီး၊ ဒီတိုင်းကြည့်ရင် မမြင်ရဘဲ မော့ကြည့်မှ သိတာပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက Lipoma (အဆီကျိတ်) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး ဆေးရုံတက် ခွဲဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ခွဲတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ပါတ်ကခွဲတာပါ၊ ထုံဆေးနဲ့ ENT မှာခွဲပါတယ်။
ထုံဆေးနဲ့ ဆိုတော့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ လုပ်ကိုင်ပြောဆိုနေတာ အကုန် ကြားရပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက Lipoma မဟုတ်ဘဲ muscles အောက် ရောက်နေတယ်လို့ ပြောသံကြားပါတယ်။ နောက် Biopsy လုပ်ပါတယ်၊ Biopsy Result က ကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပြန်ဖြစ်ရင်တော့ မေ့ဆေးနဲ့ ခွဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Biopsy Result ရဲ့ conclusion မှာတော့ Cystic Lymphangioma neck လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးကိုလဲ မေးဖို့ အခွင့်မကြုံတာမို့ ကျနော့် ရောဂါနဲ့ ရှောင်သင့်တာတွေ ပြောပြပေးပါ။
• Lymphangiomas (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) ဆိုတာ (လင့်ဖ်) သွေးပြန်ရည်လမ်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်လို့ အကျိတ် ဖြစ်လာတာပါ။
• သွေးပြန်ရည်စနစ်ဆိုတာတာ လူတိုင်းမှာရှိတယ်။ တကိုယ်လုံးက (တစ်ရှူး) တွေထဲက ပိုနေတဲ့အရည်တွေကို သွေးပြန်ကြော စနစ်ထဲ လာထည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။
• (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) က အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငယ်သူတွေက အဖြစ်များတယ်။ အသက် ၂ နှစ်အောက် လည်ပင်းမှာ ဖြစ်တာ ၉ဝ% ရှိတယ်။
• မွေးကတည်းက ဖြစ်တာလဲ ရှိတယ်။
• မွေးပြီးမှ ဖြစ်သူတွေမှာ (အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ ခိုက်မိတာနဲ့ (လင့်ဖ်) လမ်းပိတ်တာတွေကြောင့် ဆက်ဖြစ်လာစေတယ်။
• အများဆုံးက Benign lesions ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်ရောဂါပါ။ ခပ်ပျော့ပျော့၊ ဖြေးဖြေးသာကြီးကြီးလာတယ်။
• Lipoma အဆီအကျိတ်၊ Sebacious cyst ချွေးထွက်အကျိတ်တွေနဲ့ သိပ်တူတယ်။
• Cavernous lymphangiomas တွေက (လင့်ဖ်) အကြော ခပ်ဖေါင်းဖေါင်းနဲ့ သူ့ဘေးက (တစ်ရှူး) တွေနဲ့ ရောနေတယ်။
• Cystic hygromas ဆိုတာ ကောက်ရိုးရောင် အရည် ပြည့်နေမဲ့ အိတ်သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• အမျိုးအစားအလိုက် ကုရမယ်။ Aspiration စုပ်ထုတ်နည်း၊ Surgical excision ခွဲထုတ်နည်း၊ Laser လေဆာနည်း၊ Radiofrequency ablation ဓါတ်ရောည်ခြည်နည်း နဲ့ Sclerotherapy ဆေးထိုးနည်းတွေနဲ့ ကုနိုင်တယ်။
• ခွဲထုတ်တာ အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်တယ်။
• ခွဲစိတ်တာတောင် Cystic hygroma ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ (တစ်ရှူး) တွေ ထုတ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်စိနဲ့ခွဲလို့ မရတတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ လူနာအတော်များများ နှစ်ခါ ခွဲရတယ်။
• လည်ပင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ ချိုင်းနဲ့ ရင်ခေါင်းအထဲမှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
• ခွဲစိတ်ထုတ်နည်း လုပ်တဲ့အခါ -
1. Meticulous surgical excision အထူးဂရုစိုက် ခွဲစိတ်နည်း ဆိုပြီး၊ လုပ်နိုင်တာ ကောင်းတယ်။
3. Fistula malformation မတူတဲ့ မျက်နှာပြင် နှစ်ခုအကြား လမ်း (ပြွန်) ဖြစ်တာ နဲ့
4. Infection (အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါပိုးဝင်တာတွေ ကို သတိထားရမယ်။